Waa kuwee ugu fiican Amazon SEO tools maanta la heli karaa?
Looma baahna in la sheego in hoosta dhabta ah ee tartanka suuqa aanad ku guuleysan Karin suuqa Amazon - adoo saaraya badeecadaada iyo inaad sugto rajo quus ah oo aad aragto wax iibsi kasta. Waxaan loola jeedaa in la gaaro macaamiisha suurtogalka ah oo aad u beddesho iibsadaha dhabta ah waa inaad haysataa wax kasta oo meel ku habboon, gaar ahaan liiska alaabadaada. Laakiin waxaa jira wax aad u badan oo aad u maareyn karto, si aad u kormeerto oo aad ula qabsato ogaysiiska gaaban. Oo halkan waa markii Amazon SEO SEO yimaadaan ciyaaro.
Kuwani caawiyayaal yar oo online ah ma aha oo keliya wax ka sii fudud sida aad u iibinayso Amazon, laakiin ku siiyaan si dhab ah daadihin wanaagsan oo sidaas loo baahan yahay si looga badbaado halkaas. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso line khaas ah sida ugu fiican ee Amazon SEO ah oo kaa caawin kara taas - free casino offers no deposit. Waa hagaag, aynu si deg deg ah u dhex marno mid kasta oo iyaga ka mid ah! Sonar - waa fure Google oo bilaash ah, kaas oo loo tixgelinayo in uu ka mid yahay qalabka ugu fiican ee Amazon SEO ee diyaar u ah helitaanka furan ee loogu talagalay daqiiqad. Haa, Sonar waa mid bilaash ah oo la isticmaalo. Waxay noqon kartaa xal aad u fiican oo ku-meel-gaadh ah si loo helo cilmi-baaris muhiim ah oo loo baahan yahay si loo ogaado isku-dhafan raadinta oo dheeraad ah oo ku salaysan si loo isticmaalo soo-saarista liiska alaabta.
Qorshaha Keydka Google - iibsiyo badan oo badan oo e-commerce ah, weli kama warqabin suurtagal aad u weyn oo ah qalabkan taariikhiga ah ee hore ee SEO horay loo yaqaan oo si fiican u isticmaalay ganacsiga sanadaha. Qorshaha Guud ee Google waxa laga yaabaa inuu ka mid yahay aaladaha ugu wanaagsan ee Amazon SEO, gaar ahaan marka ay timaaddo kantaroolka cilmi-baarista guud oo dhan oo leh xog dhamaystiran oo laga soo qaaday kaliya hal suuqa (sida Amazon, eBay, dukaanka Alibaba, iwm. ), laakiin gees kasta oo ka mid ah shabakadda loo yaqaan 'index'. Si fudud u dhig, Qorshaha Keyword keyword Google wuxuu noqon karaa barta ugu bilawda badan ee loogu talagalay cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon kaas oo siinaya sawir weyn oo ku saabsan dhammaan isbeddelka raadinta ee la xidhiidha sheygaaga iibka ama qaybta alaabta ee aad tahay ilaa. Ka dib oo dhan, qalabkan aad u faa'iido leh ee weyn ee raadinta adduunka waa gebi ahaanba bilaash ah in la isticmaalo, sida had iyo jeer dhab ahaantii.
Ganacsatada Ganacsiga - ayaa ka mid ah shakhsiyaadka loogu talagalay qalabka Amazon SEO kaas oo si khaas ah loogu talagalay soo-saarka wax soo saarka iyo cilmi-baarista muhiimka ah ee tartanka halkaas. Waxaa ka mid ah dhinacyada ugu xooggan, Ereyada Merchant waxay u muuqdaan kuwo aad u faa'iido leh marka ay timaado guusha tartankaaga adigoo horumarinaya erayada gaarka ah ee muhiimka ah iyo isugeynta dheeraadka ah ee leh awoodda ugu weyn ee guusha. Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan qalabkan SEO-ga (platform-ka internetka, inuu noqdo mid sax ah) waa inaad ku bixiso lacag ku dhawaad ​​40 baas oo bil kasta ah. Ka dib, waxa kaliya ee adiga kugu xiran inaad go'aansato - inaad bixiso hogaanka hogaamiyaasha tartanka ugu dhow, ama inaad sii wadatid adigoo adeegsanaya software bilaash ah oo keliya.